Hisy fiantraikany ara-toekarena sy sosialy ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Mazava fa tsy maintsy hampitombo ny isan’ny mpiasa hiasa ao amin’ny seranana ny fanjakana, indrindra amin’izao fotoana fanamboarana azy izao. Hiteraka asa ny fisian’ny fiara vaventy 200 hiasa mandritra izany fanamboarana izany, ankoatra ny mpiasa ilaina rehefa vita ny tetikasa.
Nodinihana manokana nandritra ny « Forum socio-économique » natao tao Toamasina ny 29 Aogositra 2018 lasa teo ity fanitarana ny seranan-tsambo ity. Ny « Friedrich-Ebert Stiftung » ( FES ) no nikarakara ny hetsika.
Nihaona tamin’izany ny tompon’andraikitra ny seranan-tsambo, ireo loholon’i Madagasikara ary ireo firaisamonim-pirenena. Niteraka ady hevitra teto amin’ny firenena indrindra tany an-toerana ny fanitarana ity seranana ity. Torak’izay ihany koa, nanaovana fifanakalozan-kevitra tamin’ireo tompon’andraikim-panjakana sy ny SPAT izy ity.
Noho ny fitomboan’ireo asa sy ny entana mivezivezy ary ireo sambo dia sahirana ny seranana amin’ny fandraisana. Tsy maintsy nidirana ny fanitarana azy, hoy ny tale fampandrosoana sy ny fanitarana ao amin’ny seranan-tsambo, Ranaivojaona Samuel.
10 ha ny toerana hametrahana ireo « conteneurs » , hiitatra 470 metatra ny fiantsonana ireo sambo ary atao 16 m ny halalin’ny rano.
Marihana fa efa nanomboka tamin’ity taona 2018 ity izany ary ho vitaina ny taona 2022. Tsy maintsy hojerena akaiky ihany koa anefa ny lafiny fikajiana ny tontolo iainana amin’izany fanitarana ny seranan-tsambo izany. Nampahatsiahivin’ireo firaisamonim-pirenena izany fiarovana ny tontolo iainana izany.
Efa nisy fifanarahana tamin’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny ADOPT izay nanohitra ny fanitarana ny seranan-tsambo nandritra ity ady hevitra ity.
Nirina R./ Prud’homme
‹ TSENAN’NY LAVANILA: Nisy fihemorana ny tetiandro	› PRODUITS DE RECHERCHE : Vers la promotion de l’économie et de l’emploi